The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood with a very cartoon like set-up of a small town in Spain, khona ngokunganaki ibekwe maqhugwane nabantu uzulazula emhlabeni isizinda izithende. Isihloko slot kusekelwe inkunzi-elwa umdlalo ezidumile Spain lapho matador elwisana ithole omkhulu. Ngakho umqondo yokuthi kaningi lo matador ekwazile ukuhlula inkunzi noma i-alcohol, izinkokhelo okungeziwe ukuze wallets yakho. amazwi ephansi abantu asethwe ngemuva ukukunika nomuzwa idolobha eliphithizelayo.
Elk studios ungomunye walabo Ngabathuthukisi uye wakwazi ukwenza uphawu kulemboni nge imidlalo efana Bloopers futhi Wild Toro Slots. Umthuthukisi okuqaliswe ukusebenza iminyaka emine emuva futhi uye wasikhulula ngempumelelo 8 imidlalo kuze kube manje. Le nkampani ehamba sithuthuka domain ngokushesha kakhulu ubuka izinga Gameplay zinikeza.
Ububanzi ukubheja ingena phakathi 0.20 kule casino game inthanethi. Amatshwayo Wild Toro Slots ahlukile kakhulu. Wena i orange lisikiwe ngommese phakathi, rose, fan ezihlotshisiwe okububende kanye 3 zemali ezehlukene esiliva igolide kanye nethusi eliningi elingenakulinganiswa. Khona-ke kukhona zasendle uphawu Wild Toro ebhaliwe esitshekile ngombala ophuzi ibekwe yonkana isikhala esondweni. I chitha iyona matador othukuthelela amadevu encane. Khona-ke kukhona, kunjalo, endle uhamba yomdlalo esiwumfanekiso angry bull ngezimpondo namazinyo enkulu smiling ngawe. Roses eziveza ukubaluleka esiphezulu 1,000 credits kulandelwa orange knifed nge 500 zemali. Bangu 178 paylines ukunqoba.
Uphawu Wild ingena esikhundleni konke ngaphandle chitha ukwenza ngokuwina inhlanganisela ngawe. A payline izimpawu Wild uqhosha wenkokhelo eliphakeme. Uphawu Wild Toro livela kuphela esondweni yesihlanu. Yenkunzi yasendle uba Wild Ukuhamba futhi ushukumisela nendawo yonkana nge spin ngayinye. Njengoba ihamba, lishintsha zonke Matadors ukuba Wilds bese luhlala njengoba Wild ku esondweni lokuqala. Ukuthola 3 Matadors phezu itolitji wesibili, wesithathu, futhi itolitji wesine ebangela khulula kabusha spin. I Matadors unamathele izindawo zabo futhi osebenzisa extra akhuphukele njengoba omunye Matador liyavela itolitji.
Wild Toro Slots kuyinto emangalisayo inthanethi yekhasino for abadlali abafuna nje laze emhlabeni ne slot casino, futhi ungafuni ukudlala omunye okuyingozi. Elk studios, unjiniyela umxhwele ngempela nge Gameplay embobeni.